တစ်လတည်းမှာ (၂) ခါ ဘာလို့ လာတာလဲ?? - For her Myanmar
တစ်လတည်းမှာ (၂) ခါ ဘာလို့ လာတာလဲ??
တချို့က သူမလာတာ ၃၊၄၊၅ရက် ကြာပြီရှင်လို့ ဆိုနေရချိန်မှာ ကိုယ်က သူလာလွန်းလို့ စိတ်ညစ်နေရသောအခါ… ဒါ ရောဂါများလား???
မိန်းကလေးတွေမှာ တစ်လတစ်ခါ သူ့ကို မျှော်ရပါတယ်။ သူလာရင် သွေးသားမှန်တယ်။ အသားအရေလေးလည်း ကြည်သလို မိန်းကလေး မီးယပ်ရောဂါလည်း မရှိဘူးလို့ အကြမ်းဖျဉ်း ယူဆလို့ ရတာကိုး။ အဲ … ဒါပေမဲ့ သူက ရက်ရောစွာနဲ့ တစ်လတည်းမှာ နှစ်ခါ လာရင်ကြတော့ရော ….? ? ခက်ပါပြီရောလား… ဒီလို အနေအထားက ကျန်းမာတာလား ၊ မီးယပ်လား ၊ ဆေးခန်းပြေးပြရတော့မလား ဝေခွဲရ ခက်တယ်ဟုတ်?? ဒါဆို သူ့အကြောင်းလေး သေချာ သိရအောင် ကြည့်ကြည့်ရအောင်နော်…
ဘယ်လိုအကြောင်းတွေကြောင့် တစ်လတည်း နှစ်ခါလာရလဲဆိုရင်တော့ …
၁။ တစ်ခါတလေ ဖြစ်တတ်တာကြောင့်ပါ။
ရာသီသွေးဟာ ၂၄ ရက်ကနေ ၃၈ ရက်ခြား တစ်ခါလာနေသမျှဟာ တစ်လမှာ တစ်ခါပဲ လာရမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ တစ်ခါတလေ ရာသီစက်ဝန်းဟာ ရက်တိုသွားပြီး တစ်လတည်းမှာ နှစ်ခါ လာတတ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ နောက်လတွေမှာတော့ ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ လတိုင်း ၂ခါလာနေရင်တော့ ဆေးခန်းပြသင့်ပါတယ်နော်။
အပျိုဖြစ်ခါစ ရာသီလာခါစမှာ အမျိုးသမီး ဟော်မုန်းဟာ စည်းချက်ညီမှု မရှိသေးပါဘူး။ ဆိုလိုတာက အတက်အကျမမှန်သေးဘူးပေါ့။ ဒီလို အချိန်မှာ တစ်လတည်း ရာသီ ၂ခါလာတာမျိုး အဖြစ်များပါတယ်။ သိပ်စိတ်ပူဖို့မလိုသလို ရာသီစလာပြီး (အပျိုဖြစ်ပြီး) ၆နှစ်အထိကို ရာသီမမှန်တတ်သေးပါဘူး။
၃။ သွေးဆုံးခါနီးမို့လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဟော သွေးဆုံးခါနီးအရွယ်တွေဖြစ်တဲ့ အသက် ၄၅ မှ ၅၀ ဝန်းကျင်တွေမှာလည်း သူက ကယောက်ကယက်တွေ ဖြစ်ပြီး တစ်လတည်းမှာ ၂ခါ လာတတ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ ဟော်မုန်းလက်ကျန်လေးကြောင့်ဖြစ်တာပါ။ ဒီလို တစ်လ ၂ခါ လာပြီး ၁နှစ်လောက်နေမှ သွေးဆုံးတာမျိုးလည်း ရှိပါတယ်။ တစ်လ ၂ခါ လာရုံအပြင် သွေးအတုံးအခဲဆင်းတာ၊ အရမ်းကိုက်ခဲတာ ၊ အဖြူဆင်းတာတွေရှိရင်တော့ ဆေးခန်းပြဖို့လိုပါတယ်။
Related Article >>> ရာသီလာနေချိန်မှာ လက်ဖက်စားလို့ရလား?
လည်ပင်းကို မှန်ရှေ့ကြည့်ပြီး တံတွေးမျိုချကြည့်ပါ။ လုံးလုံးလေး တက်သွားတဲ့ လည်ဇလုပ်အောက်က လိပ်ပြာပုံ အကျိတ်လေးက တစ်ကိုယ်လုံးရဲ့ သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းတွေ ထိန်းချုပ်ထားတာပါ။ ဒီ အကျိတ်လေးက မူမမှန်လို့ သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်း နည်းတာဖြစ်ဖြစ် များတာဖြစ်ဖြစ် တစ်လတည်းမှာ ၂ခါ လာတာဖြစ်န်ိုင်ပါတယ်။
သိုင်းရွိုက်နည်းတယ်လို့ သိနိုင်မယ့်လက္ခဏာတွေက ရာသီမမှန်တာအပြင်
သိုင်းရွိုက် များနေတယ်လို့ သိနိုင်တဲ့လက္ခဏာတွေက
ချွေးအရမ်းထွက်ပြီး အပူဒဏ် မခံနိုင်တာ
သားအိမ်မှာ အသားလုံးရှိနေတဲ့အခါမှာ တစ်လတည်း ရာသီ၂ခါ လာတတ်ပါတယ်။ အလုံးဟာ ကင်ဆာလုံးမဟုတ်ဘဲ သားအိမ်နံရံက ကြွက်သားလုံးမို့ ရာသီသွေးဟာ ရာသီလာရက် မဟုတ်ဘဲ ဆင်းတာမျိုး ရှိနိုင်ပါတယ်။
ဆီးစပ်နေရာမှာ တင်းပြီး အောင့်တာ
လိင်ဆက်ဆံချိန် နာကျင်တာတွေ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
အပေါ်က ပြောသွားတဲ့ အချက်လေးတွေနဲ့ တိုက်ဆိုင် စစ်ဆေးရင်း ညီမလေးတို့ ကျန်းမာလှပကြပါစေကွယ်..
တခြို့က သူမလာတာ ၃၊၄၊၅ရကျ ကွာပွီရှငျလို့ ဆိုနရေခြိနျမှာ ကိုယျက သူလာလှနျးလို့ စိတျညဈနရေသောအခါ… ဒါ ရောဂါမြားလား???
မိနျးကလေးတှမှော တဈလတဈခါ သူ့ကို မြှျောရပါတယျ။ သူလာရငျ သှေးသားမှနျတယျ။ အသားအရလေေးလညျး ကွညျသလို မိနျးကလေး မီးယပျရောဂါလညျး မရှိဘူးလို့ အကွမျးဖဉျြး ယူဆလို့ ရတာကိုး။ အဲ … ဒါပမေဲ့ သူက ရကျရောစှာနဲ့ တဈလတညျးမှာ နှဈခါ လာရငျကွတော့ရော ….? ? ခကျပါပွီရောလား… ဒီလို အနအေထားက ကနျြးမာတာလား ၊ မီးယပျလား ၊ ဆေးခနျးပွေးပွရတော့မလား ဝခှေဲရ ခကျတယျဟုတျ?? ဒါဆို သူ့အကွောငျးလေး သခြော သိရအောငျ ကွညျ့ကွညျ့ရအောငျနျော…
ဘယျလိုအကွောငျးတှကွေောငျ့ တဈလတညျး နှဈခါလာရလဲဆိုရငျတော့ …
၁။ တဈခါတလေ ဖွဈတတျတာကွောငျ့ပါ။
ရာသီသှေးဟာ ၂၄ ရကျကနေ ၃၈ ရကျခွား တဈခါလာနသေမြှဟာ တဈလမှာ တဈခါပဲ လာရမှာပါ။ ဒါပမေဲ့ တဈခါတလေ ရာသီစကျဝနျးဟာ ရကျတိုသှားပွီး တဈလတညျးမှာ နှဈခါ လာတတျပါတယျ။ ပွီးတော့ နောကျလတှမှောတော့ ပုံမှနျပွနျဖွဈသှားတတျပါတယျ။ တကယျလို့ လတိုငျး ၂ခါလာနရေငျတော့ ဆေးခနျးပွသငျ့ပါတယျနျော။
အပြိုဖွဈခါစ ရာသီလာခါစမှာ အမြိုးသမီး ဟျောမုနျးဟာ စညျးခကျြညီမှု မရှိသေးပါဘူး။ ဆိုလိုတာက အတကျအကမြမှနျသေးဘူးပေါ့။ ဒီလို အခြိနျမှာ တဈလတညျး ရာသီ ၂ခါလာတာမြိုး အဖွဈမြားပါတယျ။ သိပျစိတျပူဖို့မလိုသလို ရာသီစလာပွီး (အပြိုဖွဈပွီး) ၆နှဈအထိကို ရာသီမမှနျတတျသေးပါဘူး။
၃။ သှေးဆုံးခါနီးမို့လညျး ဖွဈနိုငျပါတယျ။
ဟော သှေးဆုံးခါနီးအရှယျတှဖွေဈတဲ့ အသကျ ၄၅ မှ ၅၀ ဝနျးကငျြတှမှောလညျး သူက ကယောကျကယကျတှေ ဖွဈပွီး တဈလတညျးမှာ ၂ခါ လာတတျပါတယျ။ ဒါကတော့ ဟျောမုနျးလကျကနျြလေးကွောငျ့ဖွဈတာပါ။ ဒီလို တဈလ ၂ခါ လာပွီး ၁နှဈလောကျနမှေ သှေးဆုံးတာမြိုးလညျး ရှိပါတယျ။ တဈလ ၂ခါ လာရုံအပွငျ သှေးအတုံးအခဲဆငျးတာ၊ အရမျးကိုကျခဲတာ ၊ အဖွူဆငျးတာတှရှေိရငျတော့ ဆေးခနျးပွဖို့လိုပါတယျ။
Related Article >>> ရာသီလာနခြေိနျမှာ လကျဖကျစားလို့ရလား?
လညျပငျးကို မှနျရှကွေ့ညျ့ပွီး တံတှေးမြိုခကြွညျ့ပါ။ လုံးလုံးလေး တကျသှားတဲ့ လညျဇလုပျအောကျက လိပျပွာပုံ အကြိတျလေးက တဈကိုယျလုံးရဲ့ သိုငျးရှိုကျဟျောမုနျးတှေ ထိနျးခြုပျထားတာပါ။ ဒီ အကြိတျလေးက မူမမှနျလို့ သိုငျးရှိုကျဟျောမုနျး နညျးတာဖွဈဖွဈ မြားတာဖွဈဖွဈ တဈလတညျးမှာ ၂ခါ လာတာဖွဈနိုငျပါတယျ။
သိုငျးရှိုကျနညျးတယျလို့ သိနိုငျမယျ့လက်ခဏာတှကေ ရာသီမမှနျတာအပွငျ
သိုငျးရှိုကျ မြားနတေယျလို့ သိနိုငျတဲ့လက်ခဏာတှကေ
ခြှေးအရမျးထှကျပွီး အပူဒဏျ မခံနိုငျတာ
သားအိမျမှာ အသားလုံးရှိနတေဲ့အခါမှာ တဈလတညျး ရာသီ၂ခါ လာတတျပါတယျ။ အလုံးဟာ ကငျဆာလုံးမဟုတျဘဲ သားအိမျနံရံက ကွှကျသားလုံးမို့ ရာသီသှေးဟာ ရာသီလာရကျ မဟုတျဘဲ ဆငျးတာမြိုး ရှိနိုငျပါတယျ။
ဆီးစပျနရောမှာ တငျးပွီး အောငျ့တာ
လိငျဆကျဆံခြိနျ နာကငျြတာတှေ ခံစားရနိုငျပါတယျ။
အပျေါက ပွောသှားတဲ့ အခကျြလေးတှနေဲ့ တိုကျဆိုငျ စဈဆေးရငျး ညီမလေးတို့ ကနျြးမာလှပကွပါစကှေယျ..
Tags: Health, Menstruation, Month, Period, To my sister, Twice
မယ်တင် (ဆေး-၁) February 5, 2019